1 Ahene 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ahene Nhoma a Edi Kan 11:1-43
Solomon yerenom dan ne koma (1-13)
Ebinom sɔre tiaa Solomon (14-25)
Wɔkaa kyerɛɛ Yeroboam sɛ obenya mmusuakuw du (26-40)
Solomon wui; wosii Rehoboam hene (41-43)
11 Ɔhene Solomon dɔɔ aman foforo so mmea+ bebree kaa Farao babea+ no ho. Ná mmea no fi Moab,+ Ammon,+ Edom, Sidon,+ ne Hitifo+ mu. 2 Aman a wofi mu no, na Yehowa aka akyerɛ Israelfo sɛ: “Monnkɔ wɔn mu,* na mommma wɔn nso mmma mo mu, efisɛ sɛnea ɛte biara wɔbɛdan mo koma ama moakodi anyame foforo akyi.”+ Nanso Solomon de ne ho kɔbataa wɔn ho dɔɔ wɔn. 3 Onyaa yerenom 700 a wɔyɛ adehye, ne mpenafo* 300, na ne yerenom de nkakrankakra dan ne koma.* 4 Solomon nkwakoraabere mu+ no, ne yerenom dan ne koma kodii anyame foforo akyi;+ wamfa koma a edi mu ansom Yehowa ne Nyankopɔn te sɛ ne papa Dawid. 5 Solomon kodii Sidonfo nyamebea Astoret,+ ne Ammonfo bosom fĩ Milkom+ akyi. 6 Na Solomon yɛɛ Yehowa ani so bɔne, na wanni Yehowa akyi ankosi ase sɛnea ne papa Dawid yɛe no.+ 7 Saa bere no, Solomon sii sorɔnsorɔmmea*+ maa Moabfo bosom fĩ Kemos wɔ bepɔw a ɛwɔ Yerusalem anim no so, na osii bi nso maa Ammonfo bosom+ fĩ Molek.+ 8 Saa ara na ɔyɛ maa ne yerenom a wofi aman foforo so a wɔhyew afɔrebɔde na wɔbɔɔ afɔre maa wɔn anyame no nyinaa. 9 Yehowa bo fuw Solomon, efisɛ ne koma dan fii Yehowa, Israel Nyankopɔn+ a oyii ne ho adi kyerɛɛ no mprenu+ no ho. 10 Ná wabɔ no kɔkɔ wɔ eyi ho sɛ mma onnkodi anyame foforo akyi,+ nanso wanni Yehowa asɛm so. 11 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Solomon sɛ: “Esiane sɛ woayɛ eyi na woanni m’apam ne m’ahyɛde so nti, nea ɛte biara mehwim ahenni no afi wo nsam, na w’akoa na mede bɛma no.+ 12 Nanso wo papa Dawid nti, merenyɛ eyi wɔ wo bere so. Wo ba nsam na mehwim afi.+ 13 Mmom ɛnyɛ ahenni no nyinaa na mehwim.+ M’akoa Dawid ne Yerusalem a mapaw+ nti, mede abusuakuw baako bɛma wo ba.”+ 14 Ɛnna Yehowa maa obi a wɔfrɛ no Hadad sɔre tiaa Solomon.+ Ná ɔyɛ Edomni a ofi Edom+ adehye abusua mu. 15 Bere bi a Dawid dii Edomfo so nkonim+ a ɔsahene Yoab kɔe sɛ ɔrekosie wɔn a wɔawuwu no, ofii ase kunkum Edom mmarima nyinaa. 16 (Abosome asia na Yoab ne Israel nyinaa dii wɔ hɔ kosii sɛ okunkum Edom mmarima nyinaa.) 17 Nanso Hadad ne Edom mmarima bi a wɔyɛ ne papa nkoa guan kɔɔ Egypt; saa bere no, na Hadad yɛ abarimaa. 18 Ɔne wɔn fi Midian* kɔɔ Paran, na wɔfaa mmarima fii Paran+ ne wɔn kɔɔ Egypt hene Farao nkyɛn wɔ Egypt, na ɔno nso maa no ofi. Bio nso, ɔyɛɛ nhyehyɛe a wɔde bɛma no aduan, na ɔmaa no asaase nso. 19 Farao bɛpɛɛ Hadad asɛm paa, enti ɔmaa no ɔyere; ɔde ne yere ɔhemmaa* Tapenes nuabea maa no. 20 Akyiri yi, ɔne Tapenes nuabea no woo ɔbabarima a wɔfrɛ no Genubat; Farao fi na Tapenes tetee abofra no,* na Genubat ne Farao mma tenaa Farao fi hɔ. 21 Bere a Hadad wɔ Egypt no, ɔtee sɛ Dawid ne n’agyanom akɔda,+ na ɔsahene Yoab nso awu.+ Enti Hadad ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Gya me kwan ma menkɔ me kurom.” 22 Nanso Farao bisaa no sɛ: “Wote me nkyɛn yi, dɛn na ehia wo a enti afei de wopɛ sɛ wokɔ wo kurom?” Ɛnna obuae sɛ: “Hwee nhia me, nanso mesrɛ wo, gya me kwan ma menkɔ.” 23 Onyankopɔn maa Eliada ba Reson nso sɔre tiaa Solomon.+ Ná ɔyɛ Soba hene Hadadeser+ akoa a waguan. 24 Bere bi a Dawid dii Sobafo so nkonim* no,+ Reson boaboaa mmarima bi ano baa ne nkyɛn, na ɔbɛyɛɛ nnipabɔnefo dɔm no so panyin. Enti wɔkɔɔ Damasko+ kɔtenaa hɔ, na wodii ade wɔ Damasko. 25 Sɛnea Hadad teetee Israel no, Solomon nna nyinaa mu no, Reson nso sɔre tiaa wɔn; bere a odi ade wɔ Siria no, na okyi Israel kɔkɔkɔkɔ. 26 Efraimni Nebat a ofi Sereda no ba Yeroboam+ nso tew atua tiaa* Solomon.+ Ná ɔyɛ Solomon akoa,+ na na ne maame yɛ okunafo a ne din de Serua. 27 Nea enti a ɔtew atua tiaa ɔhene ni: Ná Solomon akyekye Esiw no,*+ na na wahyɛ ne papa Dawid Kurow no+ den. 28 Ná Yeroboam yɛ ɔbarima a ɔbɔ ne ho mmɔden. Solomon hui sɛ aberante no yɛ obi a ɔpɛ adwuma, enti ɔyɛɛ no Yosef fi apaafo nyinaa sohwɛfo.+ 29 Saa bere no ara mu na Yeroboam pue fii Yerusalem, na Siloni Ahiya+ a ɔyɛ odiyifo no hyiaa no wɔ kwan so; ná Ahiya hyɛ ataade foforo, na na obiara nka wɔn baanu ho wɔ wuram hɔ. 30 Ɛnna Ahiya soo ataade foforo a ɛhyɛ no no mu, na osunsuan mu asinasin 12. 31 Na ɔka kyerɛɛ Yeroboam sɛ: “Yi asinasin du na fa, na nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Mehwim ahenni no afi Solomon nsam, na mede mmusuakuw du bɛma wo.+ 32 Nanso m’akoa Dawid+ ne Yerusalem kurow a mapaw afi Israel mmusuakuw nyinaa mu+ nti, megyaw abusuakuw baako ama no.+ 33 Nea enti a mereyɛ saa ne sɛ, me nkurɔfo agyaw me+ akɔkotow Sidonfo nyamebea Astoret ne Moabfo nyame Kemos ne Ammonfo nyame Milkom; wɔannantew m’akwan so anyɛ nea ɛteɛ wɔ m’ani so, na wɔanni m’ahyɛde ne m’atemmusɛm so te sɛ ne papa Dawid. 34 Mmom merennye ahenni no nyinaa mfi ne nsam; m’akoa Dawid a mapaw no nti,+ mɛma wakɔ so ayɛ otitiriw ne nkwa nna nyinaa, efisɛ ɔno de, odii me mmara nsɛm ne m’ahyɛde so. 35 Nanso megye ahenni no afi ne ba nsam ama wo; mmusuakuw du na mede bɛma wo.+ 36 Sɛnea ɛbɛyɛ a daa m’akoa Dawid benya kanea* wɔ m’anim wɔ Yerusalem,+ kurow a mapaw de me din ato so no mu nti, mede abusuakuw baako bɛma ne ba. 37 Mapaw wo, na wubedi nea wopɛ* biara so; wubedi Israel so hene. 38 Sɛ wudi me nsɛm nyinaa so, na wonantew m’akwan so yɛ nea ɛteɛ m’ani so, na wudi m’ahyɛde ne me mmara nsɛm nyinaa so sɛnea m’akoa Dawid yɛe no+ a, ɛnde me nso medi w’akyi, na mɛkyekye ofi ama wo daa, sɛnea makyekye bi ama Dawid no,+ na mede Israel bɛma wo. 39 Eyi nti mɛbrɛ Dawid asefo ase,+ nanso ɛrenyɛ saa daa.’”+ 40 Ɛno nti Solomon pɛe sɛ okum Yeroboam. Ɛnna Yeroboam guan kɔɔ Egypt hene Sisak+ nkyɛn, na ɔtenaa Egypt+ kosii sɛ Solomon wui. 41 Solomon ho nsɛm a aka, nea ɔyɛe nyinaa ne ne nyansa no, wɔakyerɛw wɔ Solomon ho abakɔsɛm nhoma no mu.+ 42 Mfe* dodow a Solomon dii Israel nyinaa so hene wɔ Yerusalem no yɛ mfe 40. 43 Afei Solomon ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no wɔ ne papa Dawid Kurow mu, na ne ba Rehoboam+ bedii n’ade.
^ Anaa “mo ne wɔn nnni ayeware.”
^ Anaa “ne yerenom nyaa ne so tumi paa.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ na ɛka Edom ho anaasɛ ɛbɛn hɔ.
^ Ɔnyɛ ɔhemmaa a odi ade.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “otwaa abofra no nufu.”
^ Nt., “kunkum Sobafo.”
^ Nt., “maa ne nsa so tiaa.”
^ Anaa “Milo.” Hebri asɛmfua a ɛkyerɛ “hyɛ no ma.”
^ Kyerɛ sɛ, “aseni.”
^ Anaa “nea wo kra pɛ.”
1 Ahene 11